Wargeysyada Nairobi: Abiy Axmed ayaa u kala dab qaadaya Kenya iyo Soomaaliya
Wargeysyada The Nation iyo the East African ee Kenya ayaa sheegay in Itoobiya ay wafdi u kala dirtay Kenya iyo Soomaaliya si xal loogu helo muranka dhul-badeedka u dhexeeya labada dal.
Maqaalka wargeyska The Nation ayaa sheegay in Mas’uuliyiinta Soomalida iyo kuwa Kenya uu ka soo xigtay in Abiy Axmed, oo haatan ah guddoomiyaha urur goboleedka IGAD, uu shir u qaban doono labada madaxweyne; Uhuru Kenyatta iyo Maxamad Cabdullahi Farmajo, in kastoo aysan weli arrintan xaqiijin labada madaxweyne.gad ayaa sheegtay inay ka casbi qabto in muranka badda uu curyaamiyo dagaalka ka dhanka ah argegixisada iyo burcad-badeedda.
Arrintan ayaa ku soo beegmeyso iyadoo dowladda Madaxweyne Farmajo ay beenisay inuu wax isbaddel ah ku yimid mowqifkeedii ku aaddanaa dacwadda maxkamadda caddaaladda dunida ee ICJ.
Mas’uuliyiin Soomaaliyeed ayuu Wargeyska sheegay inuu ka soo xigtay in Dr Abiy uu in badan isku dayay inuu xalliyo khilaafka labada dhinac, haatanna waxaa ku soo biiray culeysyo arrintan la xiriira oo ka imaanaya Maraykanka iyo Britain.Itoobiya, oo dano ka leh xeebaha Soomaaliya, isla markaana iskaashi dhanka ammaanka ah kula jirto Kenya, ayay wargeysyadu sheegayan inay ku adkeysanayso in arrintan la xalliyo.
Wargeysyada ayaa sheegay in Nairobi aysan caddeyn karin warka sheegaya in Soomaaliya ay dooneyso in dib loo dhigo kiiska badda, iyadoo sheegtay in ilaa haatan aysan helin wax war ah oo rasmi ah oo arrintaasi ku saabsan.
“Arrintan waa inaan xaqiijinnaa,” ayuu Wargeyska The Nation ka soo xigtay xog-haya joogtada ah wasaaradda arrimaha dibedda Kenya, Macharia Kamau.
Kenya iyo Soomaaliya waxaa labaduba culays lagu saarayaa ayuu wargeyska leeyahay in arrintan lagu xalliyo dibedda maxkamadda.
Haddii Dr Abiy uu ku guuleysto dadaalladiisa, waxay u badan tahay, in kiiska dib loo dhigo, iyadoo fursad la siinayo in labada dal ay sameeyaan guddiyo arrinta falanqeeya, ayay wargeysyada sheegeen.
Si dib loogu dhiigo kiiska, waxay u baahan tahay in labada dal ay si wada jir ah warqad u qoraan maxkamadda ICJ, oo codsi ay gudbiyaan.